Faaraxow Ka Joog!…W/Q:-A/risaq Askar. |
Faaraxow Ka Joog!…W/Q:-A/risaq Askar.
Markii laga sii daayey Xabsiga /Saldhiga waxa uu u fakaday Magaalada Alaybaday oo ay wakhtigaa ku sugnaayeen Qoyskiisii, waxaana uu ku calaacalay markii uu gaadhay Reerkiisii, kor iyo hoosba waad iigu sheegteena , ANIGAA LA II TAAGWAAYEY! ANIGAA LA II TAAGWAAYEY! ANIGAA LA II TAAGWAAYEY! ANIGAA LA II TAAGWAAYEY! ANIGAA LA II TAAGWAAYEY! SI WALBA WAAD IIGU SHEEGTEEN! SI WALBA WAAD IIGU SHEEGTEEN!!! KOR IYO HOOSBA WAAD IIGU SHEEGTEEN, KOR IYO HOOSBA WAAD IIGU SHEEGTEEN ; ANAA LA II TAAGWAAYEY, ANAA LA I KARIWAAYEY………………………….!